नार्कोनन लागुऔषध पुनःस्थापना | लागुऔषधको शिक्षा
५० वर्षदेखि लागुऔषधबाट जीवन बचाउँदै आएको अरू
२० राष्ट्र • विश्व सफलता ... अरू
लागुऔषध सुधार केन्द्रहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट.... अरू
नार्कोनन... थप पढ्नुहोस्
ओजाइको पहाडको... थप पढ्नुहोस्
यहाँ उत्तर छ
कुलतको नराम्रो सपनाबाट निस्किन
हाम्रो विशिष्ट प्रभावकारी कार्यक्रम बारे जान्नुहोस्। नार्कोननको परिचय हेर्नुहोस्।
"मेरो जीवन फेरि मैरै नियन्त्रणमा छ "
डेरेक एच. नार्कोनन ग्रेजुएट
दिर्घकालीन सफलता नार्कोननबाट सुरू हुन्छ
लागूपदार्थ रहित विथड्रल
प्रभावकारी। कुनै पनि लागुऔषधको प्रतिस्थापन नहुने।
अर्को लागुऔषधको लागि अर्को प्रतिस्थापन गर्ने साधारण अभ्यास। नार्कोननमा छैन।
"यसले मलाईं पुन: जिउने क्षमता दिएको छ"
जारा यस. नार्कोनन ग्रेजुएट
कुनै पनि लागूपदार्थको सेवन नगर्नु भनेकै लागुऔषधबाट मुक्त हुनु हो।
न्यु लाइफ डिटक्सिफिकेसन
लागुऔषध अवशेषहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छन् र यसले लागूपदार्थ सेवन गर्ने इच्छा जगाउँछ। नार्कोनन न्यु लाइफ डिटक्सिफिकेसन व्यायाम, सौना, र पोषणले प्राकृतिक शरीरमा भएका अवशेषहरू बाहिर निकाल्छ।
"फेरि जीवन पाउँनु साँच्चैनै रोमाञ्चक छ"
डन एस. नार्कोनन ग्रेजुएट
नार्कोननमा मात्र। लागुऔषध सेवन गर्ने इच्छा हटाउन र हाम्रो अद्वितीय जीवन बिताउन न्यु लाइफ डिटक्सिफिकेसन।
नार्कोनन लागुऔषध सुधार कार्यक्रमको मुख्य तत्व भनेको यसले समाजमा, परिवारमा र पेशामा पुन प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु हो।
"मलाईं फेरी बाँच्ने हौसला पाए।"
पेड्रो एल. नार्कोनन ग्रेजुएट।
लागुऔषध सेवन गर्ने इच्छा हटाउनु। जीवन कौशलताको विकास।
नार्कोननले काम गर्ने अन्य दुई कारणहरू।
२० देश। विश्वव्यापी सफलता।
सबै देशहरू र संस्कृतिहरूलाई नार्कोननको पृथक सुधार कार्यक्रम दिर्घकालीनको लागि प्रभावकारी भएर उद्धारकारी भएको छ।
"२ १/२ वर्षदेखि लागू पदार्थबाट मुक्त, फर्केर पछाडि नहेर्ने।
जुलियस भी. नार्कोनन ग्रेजुएट
लागूपदार्थ रहित विथड्रल। लागुऔषध सेवन गर्ने इच्छा प्राकृतिक उपचार विधिद्वारा हटाउने।
जीवन कौशलताहरूको विकास गर्नुहोस्। त्यसैले नार्कोननले काम गर्छ।
सुधार कार्यक्रमको जालबाट मुक्त हुनुहोस्
धेरैहरूको लागि, सुधार कार्यक्रम एउटा घुम्ने ढोका भएको छ जुन नार्कोननमा रोक्किन्छ। असल मानिस बन्नका लागि लागुऔषध मुक्त कसरी रहने भनी थाहा पाउनुहोस्।
"नार्कोननले हाम्रो छोराको जीवन बचाएको छ।"
लिन्डा एस नार्कोननको ग्रेजुएटकी मदर हुन्।
नार्कोननको अर्थ कुलतबाट टाढा बस्नु हो।
"नार्कोनन मेरो अन्तिम कार्यक्रम थियो
र म अहिले विगत सात वर्षदेखि लागुऔषधबाट टाढा रहेको छुँ।"
"मरो अहिले एउटा पूर्ण र फलदायी जीवन छ।"
जोन डब्ल्यु. नार्कोनन ग्रेजुएट
नार्कोननले शारीरिक कुरामा ध्यान दिन्छ कुलतका अन्तर्निहित पक्षहरू जसले गर्दा एउटा मान्छे पहिले नै लागुऔषधमा फसेको थियो।
"उल्लेखनिय रूपमा प्रभावकारी"
डा. अल्फोन्सो प्यारेड्स, एम डी
"सुधार क्षेत्रमा नार्कोननको बिशिष्ठ स्थान छ..."
नार्कोननले मलाई मेरो जीवन फिर्ता दिएको छ-१००%
म्यान्डी डी. नार्कोनन ग्रेजुएट
लागू औषदबाट मुक्त जीवन बनाउनको लागि २४-घण्टे स्याहार- र सहारा।
असल मानिस बन्नका लागि लागुऔषध मुक्त रहनुहोस्।
हाम्रो विशिष्ट प्रभावकारी कार्यक्रम बारे जान्नुहोस्
यो कुनै गल्तीले हुने होइन- लागुऔषध संसारभरी नै फैलिएको माहामारी हो। यदि तपाईं वा तपाईंले चिनेको कोही व्यक्ति कुलतमा परेको छ भने, तपाईं निकै दुखी हुनुहुन्छ होला।
हामी नार्कोननमा ‍कुलत जीवन भरी छुट्दैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौ। हामी कुलत निको नहुने रोग हो भन्ने विश्वास गर्दैनौ। हामी सुधार आउने कुरामा विश्वास गर्छौ।
लागूपदार्थको चक्करबाट निस्केर फेरि जीवन प्राप्त गर्न र लागुऔषध रहित जीवन जिउन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौ। हामी यो कसरी गर्छौ? नार्कोननमा यही फरक छ।
नार्कोनन कार्यक्रम अद्वितीय छ:
नार्कोनन कार्यक्रम लागूपदार्थ रहित, गैरचिकित्सकीय प्रक्रियाबाट सुरू हुन्छ जुन लागुऔषधबाट व्यक्तिहरूलाई शीघ्र र सुविधाजनकरूपले मुक्त हुन सहयोग गर्दछ। थप पढ्नुहोस्
आश्चर्यजनक प्रभावकारी पोषण सम्बन्धी नियम, व्यायाम र सौना विधिले लागुऔषध सेवन गर्ने इच्छा र शरीरबाट हानिकारक औषधिको अवशेष हटाउन मदत गर्दछ। थप पढ्नुहोस्
कार्यक्रमको अन्तिम तत्व जीवन कौशलता कोर्सद्वारा बनेको छ। यी कोर्सहरूले एउटा व्यक्तिलाई लागूपदार्थ-मुक्त हुनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू प्रदान गर्दछन्। थप पढ्नुहोस्
यसको परिणाम लागुऔषधबाट मुक्त हुनु हो।
एक विश्वव्यापी सफलताको कथा
लागुऔषध र मादकपदार्थ प्रशिक्षण केन्द्रहरू असल मानिस बन्नका लागि लागुऔषध मुक्त रहनुहोस्
नार्कोननले अनुपम सुधार प्रविधि प्रयोग गर्छ जुन समस्याको स्रोतमा गएर दिर्घकालीन सफलताको लागि एक बाटो प्रदान गर्दछ।
लगभग ५० वर्षदेखि नार्कोननले सधैँभरि लागुपदार्थ दुर्व्यसन गर्ने सोच भएकाहरूलाई बचाएको छ। हरेक हप्ता। हरेक वर्ष। हाम्रो सफलता सधैँ बढीरहने ग्रेजुएटहरूको सङ्ख्याको आधारमा मापन गरिन्छ।
यहाँ हामीले सकेसम्म धेरै जानकारी प्रदान गरेका छौं। एक वास्तविक व्यक्ति जो आफ्नो विशिष्ट परिस्थितिको सन्दर्भमा विशिष्ट प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ त्यसको कुनै प्रतिस्थापन छैन।
हामी यहाँ छौ। हामी तपाईंलाई मदत गर्न तयार छौं।
हामीलाई यहाँ फोन गर्नुहोस् 1-800-737-5250 अहिले नै सहयोग पाउनुहोस्।
वा नार्कोनन लागुऔषध सुधार कार्यक्रमको बारेमा अझ जान्नुहोस्
समस्या धेरै समाधान एउटा।
नार्कोनन सुधार कार्यक्रमका अनुपम विधिहरूद्वारा साँच्चिकै कसरी सुधार हुन्छ थाहा पाउनुहोस्।
यी मानिसहरू लागूपदार्थ दुर्व्यसनी भएकाले लागुऔषधको समस्याका बारेमा थाहा पाइसकेका छन्।
उनीहरूको कथा सुन्नुहोस। नार्कोननले तिनीहरूलाई कसरी आफ्नो जीवन फेरि प्राप्त गर्न कसरी मद्दत गर्छ भनी थाहा पाउनुहोस।
"म कस्तो मानिस हुँ भनी थाहा पाए"
हिरोइन बाट छुट्कारा पाउनु
"छोरीहरू र परिवार फिर्ता पाए"
"विश्व भरी जहाँसुकै जान तयार"
"मलाई मेरो जीवन फिर्ता दिएका छन्।"
"सबै कुरा नयाँ जस्तो अनुभव"
"मेरो सम्मान पुनःप्राप्त गरे"
अब परिवार सँगको सम्बन्ध नजिक छ
औषधि र मादकपदार्थको कुलत एक विश्वव्यापी समस्या हो जसलाई एक वैश्विक समाधानको आवश्यकता छ, र नार्कोनन विश्वव्यापी केन्द्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रहरू, ६ नयाँ मोडेल कोन्टिनेन्टल केन्द्रहरू, एउटा केन्द्र विशेष गरी कलाकार र नेताहरूले लागि, र दर्जन अरू क्षेत्रीयर स्थानीय केन्द्रहरूको तुलनामा वृद्धि हुन चुनौतीको को रूपमा बढ्दै छन्।
एउटा नार्कोनन सेवा केन्द्र पत्ता लगाउनुहोस्
सबै नार्कोनन केन्द्रहरू हेर्नुहोस्
नार्कोनन एरोहेड यस केन्द्रमा जानुहोस् नार्कोनन सँयुक्त अधिराज्य यस केन्द्रमा जानुहोस् नार्कोनन युरोप यस केन्द्रमा जानुहोस् नार्कोनन ल्याटिन अमेरिका नार्कोनन ओजाई
हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस्।
नार्कोननले एउटा शानदार र निजी स्थान बनाएको छ जहाँ कोही पनि लागुऔषध तथा मादकपदार्थ मुक्त हुन सक्छन्।
लेख पढ्नुहोस् >
ल्याटिन अमेरिकामा लागुऔषध-मुक्त जीवनलाई वास्तविकतामा बदल्न मेक्सिकोको केन्द्रमा एउटा नयाँ महाद्विपीय नार्कोनन खुल्यो।
नार्कोननको लक्ष्य कूलतको विश्वव्यापी महामारी अन्त गर्ने हो। अहिले भर्ना हुन तैयार हुनुहुन्छ या अर्को नार्कोनन केन्द्रको अधिक जानकारी चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई मदत गर्नेछौं।
तल आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सम्पर्क विकल्प पाउनुहुनेछ।
तपाईं वा तपाईंले चिनेको कसैलाई लागुऔषध वा मादकपदार्थको समस्या छ भने, आज नै नार्कोननको परामर्शदातालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
नार्कोनन कार्यक्रमको बारेमा नि: शुल्क जानकारी प्याकेट प्राप्त गर्न यो फारम भर्नुहोस्।
सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ?
अहिले नै सुरू गर्नुहोस्
लागुऔषध मुक्त कार्यक्रम यहाँबाट सुरू हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई दिर्घकालीन सफलता प्रदान गर्नु हो।
फोन गर्नुहोस् 1-800-737-5250 लागुऔषधको कुलतमा परेका व्यक्तिहरूको सहयोगका लागि